Mogadishu Journal » Wararkii ugu dambeeyey deegaanadii lagu dagaalamay ee Mudug
Wararkii ugu dambeeyey deegaanadii lagu dagaalamay ee Mudug
Mjournal :-Waxaa xaalad deganaansho ah saaka laga dareemayaa deegaano ka tirsan gobolka Mudug oo uu shalay dagaal khasaaro dhimasho iyo dhaawac geysatay uu ku dhex-maray laba maleeshiyo Beeleed.
Dagaalka oo ka dhacay deegaanka Ina diideey oo ku yaalla degmada Afbarwaaqo ayaa waxaa ku geeriyooday in ka badan 15 ruux tiro kalena ay ku dhaawacmeen.
Wararkii ugu dambeeyey ee aan saaka kaheleyno ayaa waxaa ay sheegayaan in xaalad deganaansho ah ay ka jirto,isla markaana uusan jirin wax dagaala ah oo ka socda,balse lafilan karo inay dagaalamaan maadaama maleeshiyaadak ay ishor-fadhiyaan.
Guddoomiye ku xigeenka 2aad ee Golaha Shacabka Mahad Cabdalla Cawad oo baaq kazoo saaray dagaalka ayaa yiri “Dagaalka ka soo cusboonaaday Towfiiq iyo Afbarwaaqo waa arrin aan la aqbali karin”. Guddiga Nabadeynta iyo ciidanka xasilinta ee isku dhafka ah waa inay si degdeg ah u kala dhex galaan dadka walaalaha ah ee colaadu dhex martay.
Sidoo kale Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawaa oo ah Musharax u taagan xilka Madaxtinimada Galmudug ayaa ku baaqay joojinta dagaalkaasi, waxaana maamulada iyo dowladda ay uu ku baaqay in ay tilaabo qaado.
“Waxaan baaq nabadeed u dirayaa dadka ahalka ah ee dagaaladu ku dhax mareen deegaanada Afbarwaaqo iyo Towfiiq.Waxaan xasuusinayaa in colaadda aan ciduna ka faaideeyn, oo aan ku wada khasaareyno, Maamulada u dhaw iyo dadka deegaankaba waxaan ugu baaqayaa in dhibkaas lagu baxo lana qaboojiyo” ayuu yiri Xildhibaan Odawaa.
Dowladda oo ka hadashay dagaalkii ka dhacay Mudug
Maamulka Gobolka Bari oo digniin u diray dad ay sheegeen in ay dhibaato ku hayaan